Wararka - Sidee loo doortaa xusulka suxulka iyo maxay tahay shaqada iyo astaamaha xusulku?
Marka hore, aan ka hadalno waxa ay tahay xargo go'an
Qalabku waa nooc ka mid ah xargaha oo la dhigo meel ka baxsan jirka si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa jirka oo gaar ah, taas oo ka caawineysa saameynta daaweynta qalliinka, ama si toos ah loogu isticmaalo hagaajinta dibadda ee daaweynta aan qalliinka ahayn. Isla mar ahaantaana, ku darista dhibcaha cadaadiska iyadoo lagu saleynayo hagaajinta dibedda waxay noqon kartaa xargaha orthopedic ee daaweynta saxda ah ee cilladaha jirka.
Tusaale ahaan, jilibka jilicsan dabaysha ka dib, muruqyada xakameynaya fidinta iyo dabacsanaanta wadajirka jilibka dhammaantood waa la curyaamiyay, wadajirka jilibka waa mid jilicsan oo aan xasillooneyn, kordhinta xad dhaafka ahna waxay ka hortageysaa istaagga. Xarkaha waxaa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo jilibka si caadi ah oo toosan si loo fududeeyo culeyska. Bukaannada qaba paraplegia ee addimada hoose, jilibka laabatadiisa laguma xasilin karo meel toosan marka la taagan yahay, waana sahlan tahay in horay loo fooraro oo loo jilbo dago. Isticmaalka xargo ayaa ka hortagi kara laabatada jilibka in ay is rogrogto. Tusaale kale ayaa ah marka muruqyada anqawgu ay gebi ahaanba curyaan yihiin, anqawgu waa jilicsan yahay oo jilicsan yahay. Waxaad sidoo kale xiran kartaa xarig ku xiran kabaha si aad u xasiliso canqowga una fududeyso istaagga iyo socodka.
Ka ilaali dillaaca lafaha ama jabka halkii aad qaadi lahayd culeys
Tusaale ahaan, ka dib markii lafta femoral ama tibial usheeda dhexe ay leedahay qeyb weyn oo cillad lafo ah oo loogu talagalay tallaalidda lafta bilaashka ah, si loo hubiyo jiritaanka buuxda ee lafaha lafta oo looga hortago jabitaanka lafaha lafaha inuu dhaco ka hor intaan culeyska la saarin, addinka hoose kabadh ayaa loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo. Qalabkani wuxuu culeys ku qaadi karaa dhulka. Cuf isjiidashada waxaa lagu kala qaadaa tuubbada ischial iyada oo loo marayo aaladda, taas oo hoos u dhigeysa culeyska femur ama tibia. Tusaale kale waa dhaawac canqowga ah. Jabka ka hor intaan si buuxda loo bogsan, waxaa lagu ilaalin karaa xargo.
Or Saxo cilladaha ama ka hor tag sii xumeynta
Tusaale ahaan, bukaanada qaba scoliosis fudud oo ka hooseeya 40 ° waxay xiran karaan jaakad si ay u saxaan qallooca ugana hortagaan sii xumeynta. Kala-bax misigta ah oo fudud ama subluxation, xargo-qabsi sinta ayaa loo isticmaali karaa si loo yareeyo kala-baxa. Lugta hoos u dhac, waxaad u isticmaali kartaa qaybta ku xiran kabaha si aad uga hortagto dhibic cagta iyo wixii la mid ah. Si loo yareeyo madax-xanuunka iyo cagaha fidsan, ku darista xididdada xididdada sidoo kale waa nooc xarig ah.
Function Shaqada bedelka
Tusaale ahaan, marka muruqyada gacantu curyaan yihiin oo aysan awoodin inay shey qabtaan, isticmaal xarig si aad ugu qabato curcurka meertada shaqada (dorsiflexion position), kuna rakib kicinta korantada dhinaca hore ee kilinka si loo kiciyo foosha murqaha murqaha iyo soo celi Qalabka qabashada. Xargaha qaar ayaa qaab fudud ku jira. Tusaale ahaan, marka farta la waayo, jillaab ama guntin ku dheggan cimaamadda gacanta ayaa loo isticmaali karaa in lagu haysto qaaddo ama mindi.
ExercisesKaalmee jimicsiga gacanta
Noocyada noocan ah ayaa badanaa la isticmaalaa. Tusaale ahaan, si loogu tababaro jilicsanaanta kala-goysyada 'metacarpophalangeal' iyo kala-goysyada 'interphalangeal, bracing' oo ku haya isku-xirnaanta curcurka booska ballaadhinta gadaashiisa, iyo istiqfaallo jilicsan oo xajinaya foorarka faraha si loogu tababaro toosinta faraha.
⑥ Samee dhererka
Tusaale ahaan, marka bukaan qaba addin hoose oo gaagaaban uu taagan yahay oo socdo, miskaha waa in la fooraraa, oo foorarsiga miskaha ayaa sababi doona foosinta magdhawga ee laf-dhabarka, oo sababi karta xanuun dhabarka u hooseeya waqti ka dib. Si loo kabo dhererka xubnaha addimada, cagaha waa la kordhin karaa. .
Ation Dib u habeyn ku meel gaar ah
Tusaale ahaan, wareegga qoorta waa in la xidho ka dib qalliinka isku-darka afka ilmo-galeenka, wareegga dhexda ama jaakadda waa in la xidho ka dib qalliinka isku-darka lumbar.
Kala soocista daawada baxnaaninta iyo soo noqnoqoshada waraaqaha heerkulka iyo heerkulka sare ee kululeeyaha iyo qalabka dib u dhiska, baaluqyo kala duwan oo adeegsanaya aragtiyada naqshadeynta bayoolaji ayaa si joogto ah loo soo saarayaa. Faa'iidooyinka ay leeyihiin qalliinka fudud iyo baaxadda adag, waxay beddeli karaan gypsum waxaana si ballaaran loogu adeegsan karaa howlaha daaweynta. . Marka loo eego qaybaha kala duwan ee isticmaalka, xargaha waxaa loo qaybin karaa sideed qaybood: lafdhabarta, garabka, xusulka, curcurka, sinta, jilibka, iyo canqowga. Dhexdooda, jilibka, garabka, xusulka, iyo murqaha canqowga ayaa ah kuwa ugu badan ee la isticmaalo. Xirmooyinka dhaqan celinta casriga ahi waxay si buuxda u buuxin karaan shuruudaha kala duwan ee dhaqdhaqaaqa ka dambeeya, baxnaaninta, soo kabashada shaqada, xakameynta bixitaanka wadajirka ah, iyo soo kabashada lahaanshaha. Garbaha garbaha loo isticmaalo ee sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa ka mid ah: isku-xirnaanta garbaha afduubka garabka ee wadajirka ah iyo garabka garabka; xusullada waxay u qaybsan yihiin suxullada suxulka oo firfircoon, xusullada istaaga iyo suxulka. Xarkaha canqowga waxay ku saleysan yihiin doorkooda Doorka wuxuu u qaybsan yahay mid taagan, meel socod dhaqan celin ah iyo ilaaliye wadajir ah oo canqawga ah. Laga bilaabo bilowga qalliinka ka dib, dib u soo kabashada shaqada wadajirka ah, si loo xakameeyo leexashada canqowga iyo valgus inta lagu jiro jimicsiga, waxay door fiican ka ciyaari kartaa daaweynta iyo dhaqan celinta.
Markaan dooranayno xusulka isku xidhka suxulka, waa inaanu ku doorano hadba xaaladdeena. Isku day inaad doorato midka leh dhererka la isku hagaajin karo iyo cufka, kaas oo waxtar badan u leh tababarka dhaqancelinta.